Archive du 08-mars-2022
Governemanta Miozongozona ny sezan’i Tinoka Roberto
Ora vitsy taorian’ny nilazany tamin’ny fampahalalam-baovao fa fanapahan-kevitra noraisina tamin’ny filankevitry ny minisitra ny 23 febroary 2022 ny tsy fahafahana mampiasa ny valizy misy kodiarana (valise à roulettes) satria ny 90%
Efa tena tafahoatra kosa e !
Tanteraka tokoa ny zavatra tsy mbola vitan’ny teo aloha tao anatin’ny 60 taona, saingy miseho amin’ny endriny miiba fa tsy miabo.
Entana miha lafo Manomboka tsy taka-bidy intsony ny anana
Lasa laokan'ny mpanan-karena ny anana amin'izao fotoana raha ireo sahirana no tena nalaza ho mpihinana azy taloha.
Ahiahy kolikoly amina miliaran’ny CNaPS Manomboka mitroatra ny mpandoa latsakemboka
Andro maromaro izay no nisian’ny ampamoaka momba ny ahiahy amin’ny mety ho fisiana kolikoly goavana eo anivon’ny Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy (CNaPS).
Zava-doza tany Mandritsara Voaolana, voatapa-doha sy tanana ilay ramatoa
Tena miharatsy ny fiainana. Mitombo isa hatrany ireo karazana vono olona feno habibiana. Ramatoa iray tombanana ho 30 taona eo ho eo no hita faty izay efa tsy nisy nofo intsony tany amin'ny farihin'i Mantsabory Fagnilo,
Andranomena Zaza handeha hianatra no voadonan'ny fiara
Zaza iray handeha hianatra omaly maraina no voadonan'ny fiara teny Andranomena. Raha araka ny fantatra dia teny amin'ny sisiny saika hiampita ity zaza ity no izao tra-doza izao ka voatery nalefa eny amin'ny hopitaly.
Ampefiloha Nanakantom-baravarana ny CNaPS
Tamin’ny valo ora maraina dia efa nanomboka tsy nisokatra ny birao foibe ny CNaPS eny Ampefiloha omaly alatsiniainy 07 martsa 2020.
Dr Marius Ramaroson “An-dalana ho lasa aretina tsotra ny Covid 19”
Ny zava-misy izao ary tsy azontsika lavina dia mbola betsaka ny olona voan’ny Covid 19, hoy ny dokotera mpitsabo, Dr Marius Ramaroson.
Raharaha valizy misy kodiarana Ataon’ny olona fihomehezana ny minisitry ny fitaterana
Adihevitra tato anatin’ny andro vitsy ny mikasika ny fepetra momba ny tsy fahafahana mitondra valizy misy kodiarana na « valise à roulettes »
Vondron’ny orinasa afaka haba GEFP Mitaky fanalefahana ara-teknika sy ara-taratasy
Nisy omaly ny fihaonan’ireo solontenan’ny mpikambana ao anatin’ny Vondron’ny orinasa afaka haba na ny GEFP tamin’ny Minisitry ny fampiroboroboana ny Indostria sy ny varotra ary ny fanjifana (MICC) Atoa Edgard
Guy Rivo Randrianarisoa « Foana ve ny trafika rehefa tsy misy kodiarana ny valizy ? »
Tao amin’ny tambazotran-tserasera no nilazan’ny depiote sady minisitra teo aloha Atoa Guy Rivo Randrianarisoa, fa efa roa taona izay no nangiana ka tsy niresaka momba ny politika eto amin'ny tanàna.
Antohomadinika Tratra ilay tovolahy mpamatsy « héroïne »
Voasambotry ny Polisy misahana ny ady amin’ny zava- mahadomelina Anosy ny 04 martsa lasa teo tokony tamin’ny 12 ora atoandro teny amin’ny faritra Ankaditoa/Antohomadinika ny tovolahy iray 26 taona rehefa nivarotra héroine.
Samy manampahefana ambony Miharihary ny tsy fifankahazoana
Miharihary ankehitriny ny tsy fifankahazoana eo anivon’ireo manampahefana ambony mba tsy ilazana hoe ny governemanta Malagasy mihitsy .
Mialy Rajoelina Nitarika fambolen-kazo tany Andraikiba
Nosantarina tamin'ny fambolen-kazo natao tao Antsirabe ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izay marihina anio talata 08 martsa.
Romule Andriamanantenasoa “Mety ho sarotsarotra ny 2023 raha miala ny MMM”
Somary niakatra ny filoha Hajo Andrianainarivelo satria somary hafahafa fihetsika ny antoko politika TGV, hoy ny mpikambana eo anivon’ny antoko politika Malagasy miara-miainga na MMM,
Fahasimban’ny sosona ozonina Miha mihena ny tandavan’ala atsinanana
Misy valanjavaboary any amin’ny tandavan’ala atsinanan’i Madagasikara ankehitriny iandraiketan’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana na UNESCO,
Antoko Arema Maka ny fon’ny eny amin’ny faritra iva
Vory lanona teny Faravohitra afak’omaly alahady 06 martsa ireo mpiangaly ny baolina lavalava avy amin’ny boriboritany 6 avy eto Antananarivo,
Ministeran’ny filaminam-bahoaka Anosy Voasakana tsy afaka naka vaovao ny mpanao gazety
‘Tsy afaka mampiditra mpanao gazety izahay raha ny baiko azo avy any ambony ’ izay no voalazan’ireo polisy mpiandry ny varavarana hidirana ao amin’ny biraon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka eny Anosy omaly
Niakatra ny herin’ilay andro ratsy Ahiana ny orana mikija amin’izay holalovany
Tany amin’ny manodidina ny 196 Km atsinanana somary avaratra atsinanan’i Cap Masoala no nisy ny foiben’ilay andro ratsy miforona ao amin’ny ranomasimbe Indiana omaly tamin’ny 4ora tolakandro,